Ambatoroka : Jiolahy 01 lavon’ny balan’ny polisy
Ny alahady alina teo dia andian-jiolahy saika hanafika « villa » iray tetsy Ambatoroka no nifanehitra tamin’ny polisin’ny « Unité Spéciale d’Intervention ».
Raikitra ny fifanenjehana sy ny fifampitifirana ka lavon’ny balan’ny polisy ny 01 tamin’ireo olon-dratsy izay mbola nahitana bala sy basy vita gasy. Tafaporitsaka kosa ireo jiolahy namany. Fantatra fa isan’ireo nifampitifitra tamin’ireo Polisy tetsy Antsahabe io jiolahy io ka izao nifanehitra tamin’ny mpitandro ny filaminana izao indray. Marihina fa na eo aza ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana manoloana ilay valan’aretina COVID-19 dia mitohy hatrany ny fanaraha-maso ny filaminam-bahoaka sy ny fananany. Misokatra 24/24 ora ary 7/7 andro avokoa ireo sampan-draharaha eo anivon’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka hanampy ny olom-pirenena rehetra.